कसरी भएको थियो निर्मलाको हत्याराको खोजी ? पढ्नुस् नालीबेली - Gaurav Pokharel
कसरी भएको थियो निर्मलाको हत्याराको खोजी ? पढ्नुस् नालीबेली
कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने राज्यको अंग प्रहरी आफैं विवादमा तानिएको छ । प्रश्न के उठेको छ भने प्रहरीले अहिलेसम्म के गर्‍यो ?
प्रकरणको अनुसन्धानको लागि संगठित अपराध अनुसन्धानको लागि मुलुककै मुख्य निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोली पनि खटिएको थियो । यद्यपि, परिणामले उसकै अनुसन्धानमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रहरीले नियतवश गलत व्यक्तिहरुलाई उठाएर अनुसन्धानका नाममा यातना दिएको पनि दाबी गरिएका छन् ।
यी दुई जिम्मेवारीबीच प्रहरीले विभिन्न व्यक्तिलाई कार्यालयमा ल्याएर कागज गराउँदै छाड्दै गरिरहेको थियो । त्यस क्रममा १ सय जनालाई कागज गराएर छाडिएको थियो भने करिब ४ सय जनालार्इ सोधपुछपछि रिहा गरेको कञ्चनपुर प्रहरी स्रोत बताउँछ ।आन्दोलन चर्किरहेकै थियो तर, प्रहरीले घटनामा संलग्नको गतिलो सुराक फेला पार्न सकिरहेको थिएन । प्रहरीलाई आशंका थियो, ‘कतै घटनामा संलग्न पनि आन्दोलनमा उत्रिसके कि ?’
सर्च अभियानकै क्रममा भेटिए– निर्मला पन्तको साइकल देख्ने व्यक्ति ।
निर्मलाको शव भेटिएको अघिल्लो दिन अपरान्ह ४ बजे नै घना भण्डारीका भतिजा ६ वर्षीय बालक सन्दीपले एउटा साइकल देखे । उनले आमालाई सुनाए । सन्दीपले आमा र ठूलीआमासँग घाँस काट्न त्यहाँ आएका बेला साइकल देखेका थिए ।
भोलिपल्ट बिहानै सहकारीमा महिलाहरु बैठकका लागि भेला भए । त्यहाँ निर्मला हराएको बारे कुरा चल्यो । ‘हिजो गोलकप्पे दिदीको छोरी हराएकी छे । साइकल लिएर बमको घरमा गएकी, फर्किएर आउँदै आइन’, महिलाहरुले यसो भनेको सुनेपछि सन्दीपकी आमाले साइकल देखेको अघिल्लो दिनको कुरा सुनाइन् ।साइकलमाथि केन्द्रित भइरहँदा निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा चिनेकै मान्छे संलग्न छन् कि भन्ने प्रहरीको आशंका थियो
साइकलमाथि केन्द्रित भइरहँदा निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा चिनेकै मान्छे संलग्न छन् कि भन्ने प्रहरीको आशंका थियो ।त्यसक्रममा निर्मलाकी आमाको मोबाइलमा भेटिएको हेमन्ती भट्टको एउटा म्यासेजलाई प्रहरीले शंकाको घेरामा राख्यो । त्यसलाई भेरिफाइ गर्नुपर्ने प्रहरीलाई लाग्यो । निर्मलाकी दिदी मनिषालाई त्यस्तो एसएमएस र फोन गर्ने गरेको पाइएको थियो
म्यासेजमा लेखिएको थियो, ‘निर्मला भोलि आउँछे । भोलि कल गर्नुस् । आज छैन ।’
त्यो म्यासेज गरेको समय घटना भएको समयसँग मिल्दोजुल्दो थियो । त्यसबाट प्रहरीलाई थप शंका उत्पन्न भयो ।
छोरीको फोटो साथमा लिएर निर्मला पन्तकी अामा दुर्गादेवी ।
दिलिप विष्टलार्इ सार्वजनिक गर्दै प्रहरी ।
‘घटनास्थलका बारेमा यत्रो अनुसन्धान गरिरहँदा उसले सबै वस्तुस्थिति डिटेलमा भन्यो’, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी भन्छन्, ‘त्यसपछि विष्टका बारेमा भेरिफाइ गरौं भन्ने लाग्यो । उसलाई भित्र राख्यौं । भोलिपल्ट इन्स्पेक्टलाई कारागारमा पठायौं र उसको विगतको गतिविधि बुझ्न लगायौं ।’
सीआईबीको टोली विष्टको गाउँमा गयो । र, त्यहाँको पनि भिडियो पनि बनायो ।
‘धेरैले भनेका थिए, कहाँ पागल हुनु नि चलाख छ’, ती अधिकारी सम्झन्छन्, ‘उसको घरमा नस्पातीको बोट रहेछ । ग्राहक भएर हामी त्यहाँ गयौं । त्यहाँ सोधपुछ गर्दा भाउजूले सबै नेगेटिभ मात्रै भनिन् उसका बारेमा ।’
‘९ वर्ष जेल बसेर आएँ । तिमीहरु सबैलाई काटेर फेरि जेल बसिदिन्छु भन्छ’, भाउजूले सीआइबीका प्रहरीलाई भनेकी थिइन्, ‘अस्ति एउटी केटीलाई जिस्काएर ढुंगाले हान्दिएछ ।’
यी लगायतका वस्तुगत कुराले विष्टमाथिको आरोप पुष्टि गर्दै लगेको निश्कर्षमा प्रहरी पुग्यो ।
‘शंकाको सुई… हेर्नुस् है, हामीले शंकाको शुई पहिल्यैदेखि जिरोदेखि नै घुमायौं । जिरोदेखि नै घुम्दैछ… घुम्दैछ… तर, त्यसपछि एकैठाउँमा पुगेर अड्केको छ । तर, त्यो अड्केको ठाउँदेखि अगाडि जाने ठाउँ अझ पनि छन् । त्यहाँ धेरै ठाउँहरु छन् । जस्तैः उखुबारी पछाडि लागूपदार्थ सेवन गर्नेहरुको अखडा छ । अझ त्यहाँ कोको आउँथे… केके आउँथे… त्यो डिटेल अनुसन्धान हुनै बाँकी छ । त्यहाँ दायाँमा बन्दै गरेको ठाउँमा मिस्त्रीहरु छन् । पेन्टरहरु छन् । लेबरहरु छन् । त्यो हेर्न बाँकी नै होला । र, अन्य पाटो पनि होलान् । वरिपरि अरु मान्छे को को बाँकी छन्, तिनीहरुको पाटो पनि बाँकी नै छ । अनुसन्धान राम्ररी गर्ने हो भने अझै समय लाग्छ ।’
२०७५ असोज ३ गते २०:१२ मा प्रकाशित